Ungayikhulisa kanjani i-Asters - Izimbali
Ungayikhulisa kanjani i-Asters
Izinambuzane Ezithinta Ama-Asters
Izifo Ezithinta Ama-Asters
Izeluleko Zokugcina Zama-Asters Akhulayo
I-Aster enhle iyinhlanganisela emnandi yokuzikhandla engadini yakho. Igama layo lisuselwa egameni lesiGrikhi lenkanyezi, kodwa futhi lihamba ngamanye amagama amaningi, kanti nembali kaSepthemba, iMichemalmas daisy, nembali yesithwathwa kube ezimbalwa nje zazo.
Ama-asters ayahluka ngombala, usayizi, nokunakekelwa kalula kuye ngohlobo olukhulayo. Awusoze wathola imbali ye-aster enamacembe ewolintshi noma aphuzi - eza ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, onsomi, omhlophe, obomvu, noma opinki. Kodwa noma ngabe umbala unjani, kulula ukuwakhomba ngesikhungo sawo esiphuzi esikhanyayo esakhiwa abaningi ukugeleza .
Embonini yezimbali, ama-asters angenye yezimbali ezithandwa kakhulu ukukhula nokuthengisa. Lokhu kungenxa yokuguquguquka kwazo nempilo ende uma isike yasikwa. Zizohlala isikhathi esingaphezu kwesonto ngaphambi kokubuna.
Zingeza okumnandi engadini, ikakhulukazi ehlobo. Ngakho-ke ake sithole ukuthi ungazikhulisa kanjani!
Uhlobo Lwezitshalo Imbali
Ukuvezwa kwelanga Ilanga eligcwele noma elincanyana
Okuthandwayo Komhlabathi I-Loamy
Umhlabathi pH Iyahluka
Izindawo (ze) Zobunzima 3-8
Umbala Wembali Iyahluka, imibala ejwayelekile ifaka obomvu, obomvana, omhlophe, onsomi
Isikhathi sokuqhakaza Ehlobo noma Ekwindla
Izimfanelo Ezihlukile Idonsela izimvemvane, izinyosi ziyazithanda
Ama-Asters eza ezinhlobonhlobo eziningi . Lapho usaqala, kunzima ukusho umehluko phakathi kwabo bonke - kodwa kubalulekile, ngoba eziningi ziyakhula okuningi zinde kunezinye futhi zinembali ehluke kakhulu.
Izinhlobo ezimbili ezijwayelekile ze-aster yiNew York neNew England. Akumangalisi ukuthi nabo kunzima ukuhlukanisa.
ENew York naseNew England Aster (|)
I-aster yaseNew York inezinhlobo zombili ezinde nezimfushane, kepha ijwayele ukuhlangana ebangeni lika-2-4. Enye i-aster yaseNew York ifinyelela ngaphezu kuka-4 ′ ubude! Iziqu zincane kune-aster yaseNew England, kanti amaqabunga ngokuvamile abushelelezi.
I-aster yaseNew England ikhula ibe cishe ngo-3-4 'ukuphakama, noma ungathola izinhlobo ezikhula zibe mfushane noma zinde. Ngokuphikisana ne-aster yaseNew York, ineziqu ezinzima ngamaqabunga ambozwe izinwele. Izimbali zijule kakhulu futhi.
Ezinye izinhlobo ze-aster ezingavamile kakhulu zifaka:
I-Heath aster iyinhlobonhlobo engiyithandayo. Ikhula ifike ezinyaweni ezingama-3-4 kanti amaqabunga ayo mancane kakhulu futhi mancane. Okwenza ikhetheke kangaka ubuningi bezimbali ezincane ezimhlophe ezibonakala lapho ziqhakaza.
I-Calico aster ne-heath aster kunzima ukuyihlukanisa. Okunikezwayo ukuthi i-calico ikhula ibe yizinyawo eziyi-1-2 kuphela kanti izimbali ziqhakaza kuphela kolunye uhlangothi lweziqu esikhundleni sayo yonke indlela ezungeze.
Njengoba ungacabanga, i-aster enephunga elimnandi ibizwa ngegama layo ngephunga elikhiqizayo lapho ulithinta. Kuyinto enuka kamnandi impela, ngakho-ke uma uthola injabulo ngokuphunga izimbali ezisengadini yakho ungahle ufune ukuhamba nalokhu kuhlukahluka. Izimbali zincane kakhulu kune-heath noma i-calico aster.
I-aster ebushelelezi inesimo seqabunga esihlukile esiseqanda kakhulu noma esime okweqanda ekugcineni uma siqhathaniswa nezinye izinhlobo. Njengoba ungacabanga, amaqabunga nawo abushelelezi kakhulu kunezinye izinhlobo eziningi ze-aster.
I-Aster Enamaqabunga Enhliziyo.
Igama elivame kakhulu lolu hlobo lwe-aster yiqabunga lenhliziyo. Ihluke ngokumangazayo ezinhlobonhlobo esezivele sizimbozile, ngenxa yeziqu ezincanyana nezikhungo ezimnyama.
Akunandaba ukuthi iyiphi indlela yokusabalalisa oyisebenzisele ama-asters akho, ukubeka izikhala ngendlela efanele kubalulekile. Usondele kakhulu futhi ubeka engcupheni yokuncintisana ngamanzi nokudla.
Uma ukhulisa i-aster cultivar encane, ungahamba nengxenye yonyawo phakathi kwesitshalo ngasinye. Uma ukhulisa enye yezinhlobo ezinde kakhulu, kuzodingeka wandise isikhala okungenani unyawo (futhi kuze kube ngamamitha amabili ezinhlotsheni ezide kakhulu).
Ama-asters azokwenza kahle enhlabathini 'OK', kepha akhetha inhlabathi e-loamy edonsa kahle kakhulu njengoba izwela umswakama. Uma inhlabathi yakho ingadili kahle, engeza esihlabathini, i-vermiculite, noma i-perlite.
Badinga okungenani ilanga elincane, kepha bakhetha ilanga eligcwele ukuze likhule kahle.
Ama-asters kulula ukuwanakekela, ngaphandle kwesondlo esincane esidingekayo ukuze kukhule inqwaba yezimbali ze-aster enempilo. Kepha, ngomzamo omncane owengeziwe izitshalo zakho ze-aster zizokhula zikhiqize isethi yezimbali enamandla kakhulu.
Njalo entwasahlobo, shintsha inhlabathi yakho ngesendlalelo esincane kakhulu somquba ophilayo. Faka u-1-2 ″ wesembozo sekhwalithi ephezulu ngaphezulu ukuze uvikeleke.
Uma uhlala endaweni egcwele isomiso futhi uthola imvula engaphansi kwe-intshi ngeviki (amasentimitha ama-4 ngenyanga), kuzodingeka ukuthi unisele izitshalo zakho ze-aster phakathi nezinyanga ezishisayo zasehlobo. Qaphela ukuthi unganiseli amanzi amaningi - i-aster izwela kakhulu emanzini amancane kakhulu noma amaningi kakhulu futhi izothikamezeka ngokunisela ngokweqile. Uzokwazi ukuthi uniselwa ngokweqile uma amaqabunga aphansi neziqu zezitshalo zakho ze-aster ziyawa ngemuva kokuniselwa okunzima.
Uma ukhulisa enye yezinhlobo ezinde ze-aster, kuzodingeka unikeze ngamasu amapulani ngamunye ukuze angawi ngaphansi kwesisindo sawo.
Ukuze ukhuthaze i-aster yakho ukuthi ikhule ibe sesimweni esibi ngokwengeziwe, nciphisa ukukhula okuncane. Ngemuva kokuqhakaza kwesizini, banciphise ebusika ukuze ubalawule kancane.
Njalo eminyakeni embalwa ungahlukanisa i-aster patch yakho ukuze ‘usethe kabusha’ ngempumelelo futhi ubuyisele amandla nekhwalithi yabo.
Yize ungakwazi ukutshala i-aster ngembewu, abalimi abaningi bakhetha ukusebenzisa indlela yokuhlukanisa ukusabalalisa izitshalo zabo ze-aster.
Uma usuvele unezitshalo ze-aster engadini, noma wazi umngani ozikhulisayo, ungavele uhlukanise izitshalo zazo. Ngokumba ngaphezulu kwengxenye yezitshalo ze-aster bese uzifaka engadini yakho, ungangeqa izigaba zokuhluma nezithombo bese uqonde ngqo ezimbalini ezinhle!
Uma ukhula kusuka enzalweni, kungcono ukuqala imbewu ngaphakathi endlini lapho ungalawula khona imvelo kakhulu. Futhi ungazihlwanyela ngaphambili endlini. Lala phansi ukuhlanganiswa kwezithombo ku- Amathreyi we-10 × 20 wokusabalalisa , noma isitsha ozikhethele sona. Hlwanyela imbewu engu 2-3 emgodini ngamunye, cishe 1/8 ″ ukujula.
Lapho nje sezihlumile, nciphisa iqoqo ngalinye lembewu ngokukhetha kuphela isithombo esiqine kakhulu esixukwini ngasinye. Ngale ndlela uqinisekisa ukuthi izithombo ze-aster eziphilile, ezinamandla kakhulu kungenzeka. Ngemuva kwamasonto ama-4-6, izithombo zakho ze-aster zizobe sezikulungele ukufakelwa engadini.
Ama-asters amelana nenambuzane impela, kepha kunesiphazamisi esisodwa alwa naso.
Izimbungulu ze-lace zingathinta izitshalo ze-aster.
I-Lace Bug - Lezi zinambuzane ezincane, ezimhlophe mpunga zizovela maphakathi nehlobo. Zidla ngaphansi kwamaqabunga e-aster futhi zimunce izakhi emacembe.
Ukuze ubone ukuhlaselwa kwe-lace bug kuma-asters akho, bheka amaqabunga aphuzi. Uma ubamba ukuqubuka ngaphambi kokuba lawa maqabunga abe nsundu, ungasebenzisa izifutho eziphilayo noma insipho yokubulala izinambuzane ukushaya izimbungulu emuva. Qiniseka ukumboza ingaphansi lonke lezitshalo zakho ze-aster uma ubona noma iziphi izimbungulu zeleisi, njengoba ukushiya ngisho nezimbalwa ezingalashiwe kuzokwandisa inkinga.
Njengoba nje ama-aster emelana nezilokazane eziningi, nazo zihamba kahle uma ziqhathaniswa nezifo eziningi zezitshalo… zilondolozela okukodwa kokubi kunazo zonke: i-powdery isikhutha.
Umehluko phakathi kwe-downy isikhutha ne-powdery isikhutha. umthombo
Isikhunta se-Powdery - Lesi sifo sihlupha abalimi emhlabeni wonke, noma ngabe bakhula izimbali noma izitshalo ezidliwayo. Indlela engcono kakhulu yokwenza ukuvimbela i-powdery isikhutha ukugcina ukusakazwa komoya kuphakeme nokususa noma yimaphi amaqabunga noma izitshalo ozibona kuzo impuphu emhlophe, enothuli ngokushesha njengoba lisakazeka ngokushesha. Gwema futhi iziqu zakho ze-aster bese uzungeze izitshalo zakho ukuze wandise ukusakazwa komoya futhi ususe izinto eziphilayo ukuthi i-powdery isikhutha ijwayele ukuhlasela.
Uma ama-aster akho esevele ehlushwa yilesi sifo esicasulayo, kuningi okuhlukile ukwelashwa kwe-powdery isikhutha . Okuhamba phambili kukhona i-potassium bicarbonate noma i-hydrogen peroxide esezingeni lokudla .
Ama-asters ayindawo enhle kakhulu kunoma iyiphi ingadi ngenxa yemibala nezinhlobonhlobo ezingena kuzo. Ungaba nengadi yezimbali ephilayo ene-asters yodwa uma ufuna! Ziyisondlo esiphansi, ngakho-ke zenza ukungezwa okuhle kakhulu kwezimbali zasehlobo kwabalimi bezimbali abaqalayo.
UJustin bieber selena gomez ushadile
ukugunda izinwele ukugcina izinwele zingabonakali ebusweni
izinto ze-kinky ukuzama ebuhlotsheni
imaski yobuso yabafakeli bezibuko
Intengo yokususwa kwezinwele laser